Munaasabad isdhexgalka Bulshada ah oo xalay lagu qabtay degmada Yaaqshiid – idalenews.com
Munaasabad isdhexgalka Bulshada ah oo xalay lagu qabtay degmada Yaaqshiid
Kulan isdhexgalka bulshada ah oo uu soo qabanqaabaiyay maamulka degmada Yaaqshiid ayaa xalay lagu qabtay degmadaasi.
Munaasabadan oo qeyb ka ah kulamada isdhexgalka bulshada ah oo ay qabtaan Maamulada degmooyinka gobolka Banaadir ayaa xalay lagu qabtay Hotelka loo Yaqaano Guled Hotel ee degmadaasi, waxaana ka soo qeybgalay mas’uuliyiin kala duwan oo uu ka mid ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo madaxda degmooyinka gobolka.
Xafladaasi ayaa waxaa sidoo kale ka soo qeybgalay qeybaha bulshada degamda Yaaqshiid iyadoo halkaasi lagu soo bandhigay suugaan dhaxal gal ah iyo heeso kaladuwan oo dhaqaajiyay damiirka wadaniga Soomaaliyeed.
Intii ay socotay munaasabada ayaa waxaa laga jeediayay khudbado kaladuwan oo dhamaantood dhiirigelinayay isdhexgalka Bulshada ku nool degmooyinka gobolka Banaadir waxeyna u mahadceliyeen gudoomiyaha degmadaasi Muxudiin Xasan Jurus.
Gudoomiyaha G/Banaadir Maxamud Axmed Nuur tarsan oo halkaasi ka jeediyay hadalo u badnaa guubaabo iyo hoga tusaaleyn ayaa ku dheeraaday ahmiyada uu leeyahay barnaamihka isdhexgalka Bulshada.
Barnaamijkan loogu magacdaray isdhexgalka Bulshada ayaa lagu qabtaa degmooyinka gobolka Banaadir si loo abuuro jawi nabadeed iyo isdhexgal bulsho taas oo meesha ka saari karta kala qoqobnaantii laga dhaxlay colaadihii dalka soo maray.
Maamulka gobolka Baay oo baaq u diray Jaaliyadaha Soomaaliyeed
Qalab caafimaad oo lagu wareejiyay maamulka Ximan iyo Xeeb +SAWIRRO